Maraykanka Oo gumaad wuxuushnimo ah ka wada bariga wadanka Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka Oo gumaad wuxuushnimo ah ka wada bariga wadanka Suuriya.
On Nov 14, 2018 282 0
Diyaaradaha Isbaheysiga uu hogaamiyo Maraykanka ayaa duqeymo arxan darro oo aad u culus waxay ka geysteen qeybo kamid ah deegaannada dhaca baadiyaha gobolka Deyru-zuur oo dhaca bariga wadanka Suuriya.
Labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay diyaaradaha Taxaalufku duqeymo aan loo meel dayin ku garaaceen dadka shacabka ah ee degan bariga wadanka Suuriya, iyagoona dilay kudhawaad boqol oo ruux oo ay ku jiraan dumar iyo caruu farabadan.
Shalay oo keliya, waxaa la xaqiijiyay in duqeymo ka dhacay magaalada Ash-shacfa ee Dayru-zuur ay ku shahiideen ugu yaraan 32 ruux, oo u badan dumar iyo caruur masaakiin ah.
Sarkaal u hadlay isbaheysiga uu hogaamiyo Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday iney diayaradahooda fuliyeen duqeymaha ka socda Deyru-zuur, islamarkaana jirin wax shacab ah oo ay dileen, balse wuxuu sheegay iney sameyn doonaan baaritaanno ay ku ogaanayaan waxa dhacay.
Tan iyo maalintii khamiista, waxaa la xaqiijiyay in duqeymo ka dhacay magaalada Ash-shacfa iyo mandiqadda Kashma ay ku dhinteen ugu yaraan 80 ruux oo badankood ah caruur iyo dumar.
Majirto cid ka hadleysa dhibaatadan joogtada ay ula kulmayaan muslimiinta Suuriya gaar ahaan dhinaca bari, waxaana warbaahinta ay marar badan tabiyaan oo keliya duqeymaha kadhaca wuqooyiga Suuriya oo ay geystaan diyaaradaha Ruushka, waxaana la is weydiinayaa sababta ay uga aamusanyihiin dhibaatada uu ku kaco Maraykanka.